Inona no atao amin'ny famoahana ny afo amin'ny Fire Emblem? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Trano telo nidina - vahaolana maharitra
Trano telo nidina - vahaolana maharitra
Inona no atao amin'ny famoahana ny afo amin'ny Fire Emblem?
Fandroahanaamin'nyTandindon'ny afo: Trano telo no novonoina ho hetsika maimaimpoana na taloha na aorian'ny nifindra fa tsy izy roa, manakana ny mpilalao tsy hitazona singa iraynidina fainganaalohan'ny sy aorian'ny fihodinana rehefa mihetsika miaraka amina hetsika mandeha.
Salama ry tary. Ity i Gucci Penguin miaraka amin'ny lahatsoratra Zelda Breath of the Wild ao amin'ny Noob VS ..
Pro strats, hijery fampitahana efatra samihafa izahay ary hampiato anao tsy hijery toy ny noob ary hanao toa ny pro, tsy mbola hitako izany, Zelda Breath of the Wild dia mihataka amin'ireo stereotypes Zelda maro, anisan'izany ny rupees , ny vola Hyruleana. Amin'ny lalao Zelda hafa dia azonao atao ny manety ahitra, mamaky vilany, ary mandresy ny fahavalo ho an'ny rupees. Tsy toy izany any an'ala.
Noho izany, raha tsy tianao ny mpamono bozaka olombelona, ​​ajanony ny mijery toy ny zazavao ary manomboka mampiasa ity paikady pro ity izay mila mandefa telefaona mankany amin'ny Hebra Tower. Fantatr'izy ireo fa eo amin'ny toerana mety ianao. Raha mangatsiaka ny any ivelany ary toa any amoron-tendrombohitra ianao dia mandehana mahitsy avy eo amin'ny tilikambo ary mihetsiketsika mandra-pahitanao trano kely kely.
Ity tranobe ity dia ny Pondo's Lodge, izay an'i Pondo no anontanianao? Pondo no lehilahy namorona ny fanatanjahan-tena amin'ny bowling snowball, tena liana amin'ny fanatanjahan-tena izy ka hanome anao vola 20 rupees ka tsy afaka mandray bisikileta eo an-tampon'ny havoana ianao ary ahodinkodina handondona pin kely folo raha raisinao ny fanambiny, azonao atao ny mandray baolina lanezy ary mametraka azy eo an-tampon'ny havoana. Raiso ny lanezy ary mandehana any amin'io toerana io, atsipazo ny lanezy ary jereo ny hery misintona ataon'ny ambiny. Miarahaba anao, lalao tonga lafatra, raha tsy manaraka tsara an'ity lahatsoratra ity ianao dia mahazo 100 rupees hisolo toerana ary na dia mikapoka pin ianao dia mahazo 20 rupees izay vidin'ny bowling snowball fa raha mitokona ianao dia manana vao nanao 300 ropia.
tombontsoa azo avy amin'ny fisotro rano galona iray isan'andro
Gaga be i Pondo fa mamela anao hamerina hatrany izy, Zelda Breath of the Wild dia manolotra sari-tany goavambe izay mety ho tsara hijerena sy hankafizanao ny toerana jerena, nefa mety handany fotoana be koa, indrindra raha mandeha ianao Manome anao ny fahafaha-mandeha mitaingin-tsoavaly, fa tsy misy mahasosotra kokoa noho ny rehefa mandà tsy handeha eny amin'ny sisiny kely akory ny soavalinao, ka tsy avelanao hidina fotsiny ilay soavaly mihitsokao, andramo ity fikafika mitaingina ity, ilay pro dia antsoina hoe Pony Shuffle, any ZL mitazona rehefa mitaingina soavaly dia manilika ny fitsarana tsara kokoa an'ny soavaly ary mitarika azy amin'ny dihy kely mahafinaritra amin'ny lalana tiana. Ampiasao ity ho an'ny toerana sarotra ary ho any ambany tendrombohitra ianao amin'ny fotoana fohy ao amin'ny Breath of the Wild izay manasongadina votoatin'ny lalao manokana miaraka amin'ny fampiasana ny amiibo rune ao amin'ny Sheikah Slate anao, ny fametrahana amiibo eo amin'ny hazondamosam-pifaliana dia handatsaka harena ho anao. , ny fepetra tokana dia ny fampiasanao amiibo iray monja indray mandeha isan'andro, fa tsy hipetraka amin'ny fandrobana tsotra, andramo ity fikafika pro ity. Tehirizo fotsiny alohan'ny hampiasana amiibo, raha tsy mahazo ny harena tadiavinao ianao dia mora toy ny mamaky ny angon-drakitrao farany vao haingana indrindra.
Tsy ho tsikaritry ny lalao fa nampiasa ny amiibo mitovy fotsiny ianao, vao dimy segondra lasa izay, ka ampiasao hatrany io teknika io mandra-pahazoanao ny vidiny tadiavinao, tsy toy ny lalao Zelda hafa, ny fitaovam-piadiana ampiasainao dia ho tonga miaraka amin'ny Fotoana handravana fahasimbana ary amin'ny farany vaky Noobs vaky tontolo andro Fitaovam-piadiana izay manapotika ny fitaovam-piadianao dia manimba indroa ny fanariana fitaovam-piadiana dia manimba bebe kokoa noho ny fanafihana melee mahazatra. Moralin'ny tantara: Alohan'ny vaky ny basinao, atsipazo amin'ny fahavalo izy. Antenaiko fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity ho an'ny Zelda Breath of the Wild Noob bebe kokoa.
Azonao atao ve ny mamonjy ny tsirairay ao anaty trano telo?
Arakaraka ny zotram-pifidianana no hisafidianana, misy ny endri-tsoratra sasany izay tsy azo raisina na tsy ho afa-maina na mafy toy inona azaianareoandramovonjeo daholo.16 2020.
Te ho mpitondra feno hatsaram-panahy ianao fa tsy masiaka. Te hitazona ny fampanantenanao rehetra ianao fa tsy hainao ny manamboatra volamena be dia be? Avy eo ho anao ity lahatsoratra ity. Milalaova ara-dalàna mandra-pahatonganao ho mpanjaka.
Raha mila manapa-kevitra momba ny haba ianao, ny safidinao tsara indrindra dia ny fanarahana ny torolalana Logan. Tsy hisy fiatraikany amin'ny olona loatra izany. Ho tonga haingana kokoa amin'ny tanjona ianao, saingy azonao atao ny mandingana an'ity dingana ity raha te-hamindra ny volamena amin'ny kaontinao manokana ianao. Mifanerasera amin'ny olona misafidy safidy! Ao amin'ny Sunset House dia misy varavarana famotopotorana izay tsy manokatra mpanjaka irery! Mandehana any, reseo ny hobs ary midira amin'ny vavahady, dia hahita volamena 1 000 000 ianao ao.
Avereno ampiasaina indray izy hampiasa vola amin'ny fananan-tany, izay lafo kokoa aloha. Aza adino ny manangana ny manodidina taloha raha manontany ny tranokala, raha tsy izany dia tsy ho afaka hampiasa vola amin'ny lanja volamena amin'ny diamondra ianao, afaka mividy trano any Aurora ianao, tsy hisy fiatraikany amin'ny tranokala ity fanapahan-kevitra ity, hisy ny olona faly na izany aza, raha mahazo an'ity lalàna ity ianao, manaova toy ny teo aloha, tazomy ny volamena hampiasa vola amin'ny trano Fidio ny fampanantenanao FA AZA MITSY INDRINDRA IZAO 'Document' ny tanjona dia ny ho faty sivily 0 na dia vola amin'ny sarivongana aza, ny varavaran'ny demonia ary ny tahirimbolam-panjakana. Mbola manana trano vitsivitsy sisa ianao.
Isaky ny dimy minitra dia hahazo fandresena an'arivony ianao! Fihaonana amin'ny lafiny hafa na avelao hisokatra ny lalao na dia avelanao aza ny PC-nao fa aza mijanona ao amin'ny Toerana masina! Raha manam-bola ampy ianao Vidio ny trano sisa Raha manana ny tany rehetra ao Albion ianao dia hahazo vola 200 000 / isaky ny 5 minitra Ataovy izay tadiavinao indray ary ao anatin'ny 4 ora dia manana vola ampy ianao handoavana ny fandaniana rehetra. Ho hitanao ny olona mankahala anao, izany dia satria ny hofan-trano dia avo loatra! Aza manahy! Hiova hevitra izy ireo aorian'ny hanavotanao azy ireo. Raha manana volamena ampy ianao, ampidino ny hofan-trano sy ny vidiny amin'ny fanananao rehetra, afindrao any amin'ny Trésorier ny volamena ary 'AOKA' HANASOA ny fifanarahana Arahabaina, namonjy ny fanjakana ianao ary tian'ny olona ianao! Ianao no mpitondra lehibe indrindra!
Iza amin'ireo lalan'ny trano telo no tsara indrindra?
Raha hilalao marobe ianaoLALAN'NY MPANAFIKA, ny lamina dia tokony ho Azure Moon (Liona), avy eo Verdant Wind (Deers) avy eo voninkazo Crimson (Eagles) ary avy eo ny Fiangonana. Miasa daholo ireo miolakolaka amin'ny tapany voalohanytsara kokoaeo amin'ny tontolon'ny Liona Mangatrano, ary aorian'ny filalaovana azy ireo dia azonao atao ny manao Golden Deer hahafantarana ny momba ilay lore.10. 2020.
Raha maro no efa nanapa-kevitra hoe trano iza no hiditra amin'ny Fire Emblem: Trano telo, dia toa mbola maro ireo mbola tsy nanapa-kevitra. Ary fanapahan-kevitra lehibe ity satria misy fiatraikany amin'ny lalan'ny tantara. Saingy hatreto dia mbola misy mpilalao marobe hifaneraserana sy hampiasaina eo amin'ny sahan'ady.
Ka tianay ny hanome fahatapahana fohy ho an'ireo mpianatra 18 miaraka amina famerenana fohy ny momba ny toetrany sy ny tranony, ny fahaizany miavaka, ary ny fotoana mety hiadian'izy ireo. Ny ankamaroan'ireo fampahalalana ireo dia hita ao amin'ny lalao alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny trano iray, saingy tianay izany amin'ny iray manana toerana mety. Ka andao atomboka amin'ny tranon'ny Voromahery Mainty sy ny mpitondra azy Edelgard.
Edelgard dia manaraka ny filaharana ho lasa Emperoran'ny Empira Adreista. Indraindray izy dia azo jerena ho mangatsiaka sy manalavitra, fa ny zava-nitranga tamin'ny lasa dia nanosika azy hanatratra an'io fotoana io, angamba azonao atao ny manampy azy hisokatra amin'ireo mpianatra namany. Ny fahaizany manokana dia ny Imperial Lineage izay ampitomboiko 1,2 ny traikefa azony.
Mampiavaka azy amin'ny sabatra, famaky, fahefana ary fiadiana mahery vaika, mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny kilasy fiarovana toy ny ataon'ny tanky na mpiady mimanda. Izy koa dia iray amin'ireo mpianatra telo ahafahan'ny mpilalao mahavita S-rank amin'ny maha-vehivavy mahery fo azy. Hubert dia natokana ho an'i Edelgard tanteraka ary hanao izay hahazoana antoka fa tsy hisy na inona na inona hitranga aminy, na dia mila mandrahona mpianatra sy mpampianatra hafa aza izy.
Tsy dia miraharaha firy momba ny tsy fahampiana izy ary manana toetra izay ho hitan'ny maro fa mampatahotra dia adidin'ny manamboninahitra, izay mampitombo ny herin'ny filokana amin'ny 5 rehefa ampiasaina. Mampiavaka azy amin'ny arcs, ny saina ary ny fahefana, izay mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny mpanao majia ilaina hanararaotra izany. Ferdinand dia zanaky ny praiminisitra ao amin'ny Adreistia izay ireharehany.
Tsy mitsahatra mijery ny tenany ho mpifaninana amin'i Edelgard izy ary mandray am-pahamatorana ireo adidiny amin'ny ho mpanolo-tsaina amin'ny ho avy, miaraka amin'ny fahaizan'ny Trust, izay manome hetsika marina kokoa sy mandositra rehefa salama tanteraka izy. Tsy manana fahalemena i Ferdinand raha ny fahaizany no mahatonga azy ho mahay zavatra maro, fa ny fironany mitaingina no mahatonga azy ho safidy tsara ho an'ny lozabe sy paladin, arakaraka ny fitaovam-piadiana ifantohanao. Linhardt dia tovolahy marani-tsaina indrindra izay mirona ho kamo be ihany.
Miezaka mafy izy raha mahaliana azy ny lohahevitra iray fa aleony aleony manampy ny namany koa satria tsy mila manao ilay asa ara-batana irery. Matetika ny fahaizany manokana, izay ahafahany mamerina 10% ny HP raha misafidy ny hiandry amin'ny ady izy. Mampiavaka azy ny fahaiza-misaina sy ny finoana, izay mahatonga azy safidy tsara ho an'ny mpanao majia na pretra, matetika samy miankina amin'i Linhardt ihany koa no mpianatra lahy ahafahan'ny mpilalao mahazo ny laharana S amin'ny maha-lehilahy mahery fo azy.
Caspar no zanaka faharoa ao amin'ny fianakaviany mendri-kaja, izay midika fa tsy afaka mandova na inona na inona Elf izy ary mahafantatra ny fomba fiasa amin'izay tadiavinao. Mavesatra sy be tabataba, vonona foana izy hampiofana na handresy olon-dratsy. Teraka mpiady ny fahaizany, izay mahatonga ny fahavalo tsy ho afa-miala intsony rehefa mijoro eo akaikin'izy ireo, fahaizana Brawler vaovao ahafahany mampiasa gauntlets izay afaka manafika hatramin'ny inefatra amin'ny boribory miankina amin'ny hafainganana.
Bernadetta dia zanaka vavin'ny andriana ambony ary voafandrika malaza. Na eo aza izany dia mankafy hetsika isan-karazany izy ary maniry ny hahazo namana. Tsy hainy fotsiny ny mandeha amin'io.
Ny fahaiza-manaony dia ny fanenjehana izay manome azy bonus Attack iray rehefa tsy feno HP izy. Bernadetta dia mahay any Lances sy Bows ary amin'ny zavatra hafa kely, fa sniper mahafinaritra izy. I Dorothea irery no olon-tsotra ao amin'ny Black Eagle House ary mpihira opera taloha izay nampiasa ny fifandraisany hianatra.
Maniry ny hahita tovolahy tsara any an-tsekoly maniry ny hiara-hipetraka aminy alohan'ny hanjavonan'ny hatsarany. Ny fahaizany dia mpihira izay mamela ireo mpiara-miasa akaiky aminy hamerina 10% amin'ny HP faran'izay betsaka amin'ny fiandohan'ny fihodinana tsirairay. Mahafinaritra amin'ny alàlan'ny sabatra sy fahasalamana izy, izay mety hahatonga azy ho olom-banona mety maty izay afaka mampiasa ny roa, i Dorothea no faharoa amin'ny mpianatra vavy telo izay azon'ny mpilalao tratrarina mba hahazoany laharana S amin'ny maha-protagonista vehivavy azy.
Petra dia tovovavy avy any amin'ny firenena vahiny any Brigid. Amin'ny maha zafikelin'ny mpanjaka azy, dia azo antoka fa takalon'aina izy na dia nanao izay farany vitany aza. Mianara avy amin'i Fodlan ary ampio ny tanindrazany.
Afaka mamaky ilay fiteny amin'ny fomba mahomby izy nefa mbola sahirana amin'ny fitenenana azy. Ny fahaizany manokana dia ny Hunter's Blessing, manome ny Critical Chance lehibe kokoa rehefa latsaky ny antsasaky ny fahasalamany ny fahavalo. Mampiavaka azy ihany koa ny fitaovam-piadiana maro samihafa sy ny fahaiza-manidina izay afaka manampy azy ho tonga Pegasus na Wyvern Knight.
Raha tsy izany, ny hafainganam-pandehany dia afaka manampy azy ho lasa mpitondra sabatra na mpamono olona. Manaraka izany dia ny Golden Deer House, eo ambany fitarihan'i Claude. Anjarany izao.
Izy dia taktika sandoka, mieritreritra foana ny hisoroka ny fifanolanana amin'ny rivotra mora, na dia mety tsy ho eo ambanin'ny tany aza izany. Ny fahaizany dia mitovy amin'ny an'i Edelgard, izay mahatonga azy hanana traikefa bebe kokoa. Miavaka amin'ny sabatra, tsipìka, fahefana ary sidina izy, izay manome azy fotoana betsaka hitombo amin'ny maha mpiady azy.
Lorenz dia zanaky ny fianakaviana aristokrat izay mihevi-tena ho vehivavy andriambavy. Mino tanteraka ny zava-bitany izy, ka mahatezitra ny olona manodidina azy izany. Matetika izy no tsy mahalala izay ratsy nataony.
Ny fahaizany manokana dia Distinguished House, izay ahafahany manao fahasimbana roa fanampiny amin'ny fananganana bataly, izay mahatonga azy ho mpitsara tsara. Izy koa dia somary eklektika ary mahay ao Lances, Reason. mivoaka, ary mitaingina. Izy telo mianadahy dia hahatonga azy ho Knight mainty tsara raha vao nahavita masterclass izy.
Raphael dia olom-pirenen'ny fianakaviana mpivarotra namoy ny ray aman-dreniny tamin'ny fahatanorany. Na izany aza, falifaly sy be fanantenana izy ary miahy manokana ny tenany amin'ny fampiofanana, sakafo ary fikarakarana ny rahavavaviny. Goody Basket ny fahaizany manokana, izay manome azy ny vahana hiverina 10% amin'ny maxHP amin'ny fiandohan'ny fihodinana tsirairay mifototra amin'ny satan'ny vintana.
Izy dia jiolahimboto mandehandeha ary, aleony ny famaky, ny gauntlets ary ny fiadiana mahery, izay mahatonga azy ho mpitaingin-tsoavaly tsara. Ignatz dia zanaka iray hafa amin'ny fianakaviana mpivarotra iray izay nanomboka nianatra hatramin'ny zokiny lahy te-handova ny raharaham-pianakaviana. Na dia tsy mpankafy ady aza dia mankafy ny kanto; ny fahaizany mijery dia maso izay mazava ho azy fa mampitombo ny fahamarinany; mifanaraka tsara amin'ny heriny amin'ny tsipika izany ka mahatonga azy ho sniper mahery vaika; Lysithea dia zanakavavin'ny Noblewoman iray ary mpianatra tanora indrindra ao amin'ny monastera, mankahala ny fahitana azy amin'ny maha-zaza azy kanefa dia manan-tsaina tokoa izy na izany aza.
Izy koa dia manafina tsiambaratelo iray. Ny fahaizany atidoha dia mampitombo ny traikefa azony tamin'ny ady, izay ahafahany mianatra haingana ny fahaiza-manao vaovao al tolona, ​​fa ny fahaizany manana saina, finoana ary fahefana dia midika fa mahomby avy lavitra. Marianne dia tovovavy tena tony ary tsy dia mifanerasera amin'ny olon-kafa, aleony mivavaka amin'ilay andriamanibavy na mandany fotoana amin'ny biby.
Ho fanampin'izany, ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala zavatra betsaka momba azy ireo ary azo antoka fa tsy manome na inona na inona izy ireo. Raha ny tena izy, ny fahaizany manokana dia Animal Lover, izay ahavitany hatramin'ny 20% ny HP faratampony amin'ny fiandohan'ny fihodinana rehefa mijoro eo akaikin'ny mpitaingin-tsoavaly na mpiray dina manidina. Midika koa izany fa miavaka amin'ny mitaingina, manidina ary mino izy.
Afaka mampiasa sabatra izy fa mety ho pretra mahay kokoa. Raha mifantoka amin'ny lances ianao dia mety ho lasa Knight Knight amin'ny taranja master. Hilda dia zanakavavin'ny andriana ambony ary toy izany koa no nahazoany fandrobana sy kamo.
Raha misy fomba hialana amin'ny asa dia ho hitany tokoa izany, nefa izy dia mpiara-miasa akaiky amin'i Claude ary mino azy fa tokony hanao fahavoazana fanampiny 3 izy d na eo aza ny hakamoany dia samy tsara ny lances sy ny famaky , na dia tsy manana fahefana amin'ny bataly aza izy. Raha mandinika kely ny fahaizany manidina izy dia mety ho lasa tompokovavy tsara. Leonie dia olom-pirenena avy amin'ny tanàna kely iray izay malainaloka ary mahita ny mpifaninana aminy ho mpifanandrina aminy.
Tamin'ny fahatanorany dia nihaona tamin'ny raim-pianakaviana malaza ilay mahery fo, izay nanentana azy ho mpikarama an'ady. Mihevitra ny tenany ho mpianatra voalohany sy tsara indrindra izy ary tsy kivy alohan'ny fanamby iray. Ny fahaizany dia Rivalry, izay ahafahany miatrika fahasimbana 2 bebe kokoa ary manimba kely kokoa ny 2 rehefa eo akaikin'ny lehilahy mpiray dina aminy.
Tsy manana fahalemena i Leonie raha ny fahaiza-manao no resahina, saingy aleony milanja lefona, tsipìka ary mitaingina soavaly, izay mety hahatonga azy ho kilasin'ny talen'ny tànan'andriana. Ary farany misy ny Blue Lion House, tantanan'i Dimitri, Prince Prince of the Holy Kingdom of Fhargus. Namoy ny ray aman-dreniny sy ny namany maro izy tamin'ny fahatanorany tamina hetsika iray fantatra amin'ny anarana hoe ilay loza Duscur.
Na izany aza, aleony mampiseho ny tenany ho lehilahy manetry tena, na dia miharihary aza fa manafina fanaintainana be dia be izy. Toa an'i Edelgard sy Claude, manome azy traikefa fanampiny ny fahaizany. Ny heriny dia mitoetra amin'ny sabatra, lefona ary fahefana izay mety hamela azy handeha amin'ny lalana maro samihafa nefa tsy dia miharihary loatra amin'ny tovolahy iray, teraka tao Duscur, izay nanompo an'i Dimitri tamim-pahatokiana nandritra ny efa-taona lasa.
Matetika izy dia fohy amin'ny teniny ary fantany fa maro no tsy matoky ny olona ao amin'ny fireneny. Saingy tsy raharahainy ireo teny ireo ary mifantoka amin'ny fiarovana an'i Dimitri izy. Ny fahaizany manokana dia ny ampinga miorina tsara izay mamela azy hanamafy ny fiarovany rehefa miandry ady.
Ny ady dia ady sarotra izay misy fitaovam-piadiana maro ary koa mahazatra ny akanjo mahery, izay mahatonga azy ho voajanahary ho toy ny soavaly mitazona vy; azo atao koa ny mampiasa ny heriny lehibe mba hahatonga azy ho mpiady na grapple. Felix dia zanaka fianakaviana manan-kaja izay mametraka ny fahaiza-manao ady mihoatra ny zava-drehetra. Tsy dia miraharaha firy momba ny nicety izy fa mifantoka amin'ny haiady haiady ataon'ny olona, ​​izay manaja azy fotsiny no hajainy.
Izy dia mifandray akaiky amin'i Ingrid, Sylvain ary Dmitri, na dia eo aza ny momba ity farany dia toa fifandrafiana izany. Ny fahaizany dia Lone Wolf, izay mamela azy hiatrika fahasimbana 5 fanampiny raha tsy voatendry andia-miaramila. Felix dia mivelona amin'ny sabatra, tsipìka ary gauntlet, ka nahatonga azy safidy tsara ho an'ny maherifo na kilasy master sabatra.
Ashe dia zanaka natsangan'ny andriana, na dia teraka teratany aza. Tovolahy matotra izay mijery tsara ny rainy ary mahalala ny lalan'ny varotra. Ny fahaizany lockpick dia mamela azy hanokatra varavarana sy tratra eo amin'ny ady tsy misy lakile, hahatonga azy ho mpangalatra voajanahary.
Mahafinaritra ny famaky sy ny tsipìkany, na dia ny fahalemeny ihany aza no antony, ny kilasy voafidy dia mety ho zavatra rehetra, saingy toa aleony ny andraikitry ny Wyvern Knights. Sylvain dia mpandova fianakaviana manan-kaja lehibe, na dia misy aza ny fahasarotana amin'ny lasa dia afaka ny ho namana mahatoky izy, na dia manana fahalemena lehibe aza izy. Mampatahotra ny manodidina azy ny vehivavy izay matetika mampiaraka mihoatra ny Ne indray miaraka.
Ny fahaizany manokana dia Philander, izay mamela azy hiatrika fahasimbana fanampiny 2 ary haka fahasimbana 2 kely kokoa rehefa mijoro eo akaikin'ny vehivavy mpiray dina aminy. Ny hany tsininy dia ny tsipìkany, saingy tiany ny mitaingin-tsoavaly izay mahatonga azy ho safidy mora amin'ny Cavalieror Paladin. Teraka tamina fianakaviana mendri-kaja tao amin'ny fanjakana i Mercedes fa tamin'ny farany kosa dia nifarana tany amin'ilay Fanjakana.
Tovovavy miteny malefaka izy ary tsara tarehy Afaka adala, fa mijery tsara ireo manodidina azy hikarakara azy araka izay tratry ny heriny. Izy koa no sakaizan'i Annette akaiky indrindra. Ny fahaiza-manao manokana an'i Mercedes dia ny Live to Serve, izay mamela azy hamerina amin'ny laoniny ny HP mitovy aminy hamerenany orinasa hafa mampiasa saina sy finoana.
Raha ny fahaizany dia miavaka amin'ny maha-pretra azy izy, na dia mety mifantoka amin'ny fanaovana azy ho masterclass Gremory aza ny fahaiza-misaina. Mercedes no farany amin'ireo mpilalao ambaratonga voalohany telo afaka mahazo naoty S miaraka amin'ilay vehivavy gonist Prota. Annette dia zanak'anabavin'ny manan-kaja izay mitady olona any am-pianarana.
Niavaka tamin'ny sekoly majika taloha izy ary mpiasa miasa mafy tokoa, na dia tsy manana ny fahaiza-manao ao an-dakozia aza izy. Izy koa no sakaizan'i Mercedes indrindra ary matetika izy roa no miaraka mahita. Ny fahaizany manokana dia fikirizana, izay ahafahany mivondrona mpiara-miasa mba hampitomboana vetivety ny heriny.
Na eo aza ny fironany hanjohy hevitra, dia mora ampiasaina amin'ny famaky koa izy. Samy tsy aleon'ny kilasy roa miaraka, fa ny fanaovana izany dia mitaky fifantohana mba hahatratrarana ny fahafenoany feno. Ary farany dia ao i Ingrid, zanakavavin'ny andriana ambony sy sakaizan'i Felix, Sylvain ary Dimitri.
Mety ho izy koa izy no be atao indrindra tamin'izy rehetra, na dia sahirana tao an-trano aza izy matetika ary niezaka nanafina azy. Ny fahaizany dia Lady Knight, izay manome azy hery sy fahamarinana fanampiny rehefa mampiasa filokana. Tsy manana fahalemena izy raha ny fahaiza-manaony, ka fanontaniana bebe kokoa raha tianao kokoa ho toy ny soavalaly mpitaingin-tsoavaly na Knight Pegasus izy.
Na izany na tsy izany, io dia singa iray matevina amin'ny manodidina rehetra. Ary izany rehetra izany ireo mpianatra isaky ny trano telo ao amin'ilay lalao. Samy mitondra zavatra tokana amin'ny latabatra ny tsirairay ary ny tantaran'izy ireo dia mivaingana kokoa noho izay natoronay teto, fa trano iza no hofidinao amin'ny farany? Ary satria azonao atao ny manangona mpianatra ho ao an-tranonao, iza avy ireo olona hiaraka aminao? Ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra izany ary misoratra anarana amin'ny GameXplain raha te hahalala bebe kokoa momba ny Fire Emblem sy ny lalao hafa.
Tokony hamono an'i Ferdinand trano telo ve aho?
Ferdinandho faty foana raha tsy hoe nangatahinao alohan'ny takelaka misy ny fotoana dia jeneraly jeneraly iray no misolo toerana azy.roa. 2020.
Raha ny mifamono no anjarantsika dia tsy afaka sy tsy hanaja ilay andriamanibavy aho. Ny hany angatahiko dia raha mandresy ianao, farafaharatsiny manana ny fahamendrehana hamono ahy haingana: (Psssh tsy misy hun manokana.
Ny iray amintsika dia tsy maintsy maty> :( Lol. LMAO. Azonao izany.
Tiako ahoana izany rehetra izany? Maharikoriko
Iza no nampiofana anao? Dingana hafa mandroso. Tsy mieritreritra izany ianao? Heveriko fa mifankatia aho! Ataonao maloka aho X) Oh Lonato
Enga anie ianao hahita ahy. Toy izany no fijerin'ny tena lehilahy. Azafady mba avelao aho haneho ny fankasitrahako mandrakizay.
Faly be koa aho. Ny fahatsapana sasany dia tsy azo apetraka amin'ny teny na soratana. Sambatra koa aho! B-bappy? Misy zavatra mamirapiratra amin'ny ahy Tenda tsy hifidy
Famaranana mety amin'ny dragona toa an'i El. Andriamatoa
Toa tsy izany ianao. Tsara. Inona? Tsy misy zavatra mety ho lavitra amin'ny fahamarinana! Faly be aho, saika tsy mahafehy tena !: DI AM ERNST.
Io fandresena io dia vokatry ny asa mafy ataon'ny tsirairay. Misaotra namako, nahavita soa ianao! Marina izany, saingy nandreraka androany. Noana be aho ka tsy zakako.
Raha ny marina dia mandeha ihany koa aho mankao amin'ny efitrano fisakafoana. Izaho no zanakao-vavy araka ny irinao. Naratra aho :( fa miaraka aminao aho.
Vonona rehefa eo ianao. Hahafinaritra ahy koa eto. Okay! Hahafinaritra izany! Hetezo ny legioma ho sombin-kaikitra.
Azo antoka Chef Dedue. Tsy mila miantso ahy toy izany ianao. Tsy afa-po ve ianao? Tsia, tsy amin'ny kely indrindra, Chef Master Doodah.
Reraka kely fotsiny aho. Mitranga amiko indraindray. Tsara.
Arosoy avy eo ny sosona ambony lapoaly, tandremo izany hafanana izany. Reny miaro ahy
Tadidinao fa te hanandrana sakafo Duscur bebe kokoa aho, sa tsy izany? Ie, ahoana izany? Mahavariana !: D Mahandro tsara lavitra ianao noho izaho. Ny zava-manitra dia nikitika tsara. Tena afaka mahatsapa ny aingam-panahy Duscur aho.
Mahagaga toy ny mahazatra foana ny nahandro nataonao. Fanambarana ity sakafo ity! Tsy azoko atao ny mitsiky rehefa mihinana azy aho. Tsy nanantena zavatra betsaka tamin'ny sakafo Halle aho, na izany aza tsy diso fanantenana izany.
Ny fihinanana sakafo no manafana ahy foana. Hurray! vonoy izahay olona! Tiako ity lovia ity lovia tena tian'ny dadako io.
Tsy mampino, na ny tiako aza! Tianao koa ve dia matsiro! ny tiako indrindra amin'ny fotoana rehetra. Na dia tsy dia liana amin'ny sakafo aza aho dia miaiky fa fahalemena amin'ity lovia iray ity. Tadidio io profesora io, midika izany fa mihevitra izy fa matsiro tsara ny sakafo.
Fa maninona Lonato? Heveriko fa mbola ao amin'i Lord Lonato ny eritreritrao.
Oh, hoy Félix. Salama aho. Diso fanantenana fotsiny aho ny amin'ny kely vitako.
Mety tsy tian'ny fiangonana ny fihetsem-poko amin'ity lafiny ity, fa any Fodlan, rehefa maty ny olona dia mandalo hiaraka amin'ilay andriamanibavy, sa tsy izany? Angamba
Ataoko angamba fa toa lavitra be izany.
Aleoko ianao nijanona teto. Ny ray aman-dreniko, ny rahalahiko Lonato, angamba afaka miaina velona amin'ny alalako izy rehetra. Raha mbola mieritreritra azy ireo ianao dia hanao izany.
Misaotra betsaka. Ny fihainoana azy ireo miteny dia midika zavatra betsaka izany. Tonga eto ny tanandrano.
Mitandrema sao ho saroinao loatra
Dedue ny sakafonao matsiro tena izy tokoa.
Mihinàna araka izay tianao. Mirary soa ho an'i Faerghus.
Inona no hitranga raha manangona trano telo ho an'ny tsirairay ianao?
Ireo izay mifangaro ao amin'ny tantara dia hiala amin'ny fety amin'ny fiantombohan'ny fotoana aryafakahovonoina na ho afa-mainarehefa ianaoreseo izy ireo amin'ny fotoana iray amin'ny lalao.Raha ianaohitsitsy azy ireoizy ireohiditra indray. Tsy ny toetra rehetra anefa no hiseho, ka izay tsy hanaiky dia hijanona.7. 2020.
Afaka mamonjy an'i Jeralt ve ianao?
Fampahalalana ho an'ny mpampiasa: Sid_Starkiller.ianareotsy afakaafa-tsyizy. Na izany aza tsy misy resaka fanohanana azy.28. 2020.
Tokony hilalao ny lalana rehetra amin'ny trano telo ve aho?
Tsy mila manao izanyrehetraindray mandeha, na izany aza. Mialà sasatra aorian'ny voalohanylalana, ary avy eo mandroso isaky ny tianao izany. Fidio nylalanatianao, arymilalaony ambiny isaky ny manana faniriana hanao izany ianao. Lalao lava ity, ary mifanohitra amin'izay ny fandoroana ny lalao video.5. 2020.
Ahoana no ahitanao ny làlana miafina 3 House?
ianareoeFAhahita an'i Edelgard ao amin'ny campus ary hiresaka aminy mandritra io fomba io. Rehefa hitanao izy dia hangataka aminao izymanaosafidy eo amin'ny fanarahana azy na ny fijanonana ao amin'ny monasitera rehefa voatosika. TSY MAINTSY misafidy ny hanaraka azy ianao, raha tsy izany dia voahidy hiala amin'ny Afo Afo ianaoLàlana miafina trano telo.
Ahoana no amitsaranao ireo mpianatra ao anaty trano 3?
Fa azonao ataonanamizy ireo RAHA miady amin'izy ireo miaraka amin'i Byleth ianao. Olon-kafa no hamono azy ireo. Lorenz sy Ashe (amin'ny zotra samihafa) azo resena lahatra RAHA i Byleth no nanangona azy ireo aryvoatsimbinaizy ireo. Amin'izay izy ireo dia hanaraka anao.06.30.2020
Tokony hamono an'i Ignatz ve aho?
Afaka mitsitsy ianaoIgnatz, Leonie, Hilda, Ashe, Annette, Gilbert, Cyril ary Catherine raha ianaohamonoanaony lehibe. Claude, Seteth ary Flayn dia azo avotana raha toa ka ianaohamonoanaomiaraka amin'i Byleth izy ireo.03.07.2020